MoBile ချစ်သူများ - ♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥
All Groupsသင်၏အဖွဲ့ များ MoBile ချစ်သူများ
ရဲဂျာ မှ တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်
မိုဘိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ နည်းပညာ များကို ဒီမှာ ဆွေးနွေးလေ့လာနိုင်ပါတယ်
Latest Activity: Mar 26 မျှဝေမယ် Twitter
Started by မောင်တင်ဦးမောင်. Last reply by thuraaung Mar 22. Phone Ringtones လေးတွေဒေါင်းမယ်
Started by CLOUD. Last reply by မြတ်ချစ်ဆု Feb 13. ဖုန်း Ring Tone အလန်းတွေ ထပ်လာပါပြီ - ၁
Started by ရဲဂျာ Nov 4, 2012. Nokia ဖုန်းတွေမှာ မြန်မာစာပေါ်အောင် လုပ်နည်း(Last update)
Started by ရဲဂျာ. Last reply by မျိုးကျော် Aug 24, 2012. Andriod Version သုံး Tablet / Phone များတွင် မြန်မာစာ Fonts ထည့်သွင်းနည်း
Started by ရဲဂျာ. Last reply by sik naing Jul 13, 2012. Android ဖုံး တွေကို မြန်မာဖေါင့် ထည့်နည်း နဲ့ Root လုပ်နည်း
Started by ရဲဂျာ. Last reply by zaw hein Jul 2, 2012. Ringtones လေးတွေပါ
Started by Hninyu. Last reply by yu nandar aung Jun 28, 2012. Sony Ericsson xperia များကို root, font, keyboard ထည့်ခြင်း
Started by ရဲဂျာ. Last reply by မျိုးကျော် Jun 28, 2012. android ဖုန်းများ internal app များ external app များပြောင်းနည်း
Started by soooeminnn Jun 28, 2012. ဟန်းဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ အသုံးဝင်မှု
Started by လဲ့. Last reply by ကောင်းကင် Jun 25, 2012. Mobile Phone ကိုင်ဆောင်သူများသတိပြုရန်။
Started by ရဲဂျာ. Last reply by zaw hein Jun 24, 2012. want to know
Started by Aung Moe Jun 13, 2012. Samsung Galaxy Ace Official Gingerbread 2.3 နှင့်အထက် Root လုပ်ပြီး မြန်မာဖောင့်ထည့်နည်း
Started by ရဲဂျာ. Last reply by kaungmyat May 7, 2012. iPhone မှာ မြန်မာဖောင့် ထည့်သွင်းနည်း
Started by ရဲဂျာ. Last reply by Aung Bo Bo Feb 25, 2012. IPHONE ,IPAD,IPOD တွေမှာ မြန်မာလိုပေါ်အောင်.....ပြုပြင်နည်း
Started by ရဲဂျာ. Last reply by han tun Feb 12, 2012. iphone အား Unlock နှင့် jailbreak ခေါ် ထောင်ဖောက်ခြင်း
Started by ရဲဂျာ. Last reply by chanmyaenaing Feb 9, 2012. သင့်ရဲ့ Nokia smart phone ကို မြန်နှုန်းတင်ရအောင်.(Speed up Nokia Smartphone)
Started by ရဲဂျာ. Last reply by အောင်မျိုးဦး Feb 8, 2012. မြန်မာပြည်အတွက် Nokia မှ ထုတ်လုပ်လိုက်သည့် စကားပြောစက်၊ Free Call Unlimited
Started by ရဲဂျာ. Last reply by thiha Jan 26, 2012. အသစ်ထွက် Android ဂိမ်း Bug Village v1.2.0
Started by ရဲဂျာ. Last reply by rockking15987 Jan 5, 2012. ယောင်္ကျားလေးတွေ ကြိုက်လောက်မယ့် မိုဘိုင်းဖုန်း ဂိမ်းများ
Started by ရဲဂျာ. Last reply by rockking15987 Jan 3, 2012. အားလုံးကြည်ရန်
You need to beamember of MoBile ချစ်သူများ to add comments!
Admin Comment by နံရိုး on December 13, 2012 at 9:58am ဟားဝေးးး8661မှာမြန်မာဖောင့်ထည့်လို့ရမယ်ဆိုရင်နည်းလမ်းလေးသိချင်ပါတယ်
ကျေးဇူးပြုပြီးတင်ပေးပါနော် Comment by မျိုးကျော် on August 24, 2012 at 8:57am nokia lumia 900 & 800 ဝင်းဒိုးဖုန်းတွေကိုမြန်မာဖောင့်ထည့်လို့ရပါသလား ရရင်တင်ပေးပါဦး Comment by တောင်ပေါ်သားလေး on July 9, 2012 at 1:16am u5i vivaz ကို version မြင့်လို့ရပါသလားခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးကူညီပေးကြပါ
Comment by zaw hein on June 24, 2012 at 4:24pm ကျွန်တော့်ကိုလည်းကူညီပါဦးနော်ကျွန်တော့်ဖုန်းကblackberry 8520ပါ.myanmar font သုံးချင်လို့ပါ Comment by မျိုးကျော် on June 24, 2012 at 2:36pm nokia c6 01 ကိုဘယ်လိုသွင်းရမလဲမြန်မာစာရအောင်ကူညီပေးကြပါနော် ချက်တင်လဲတက်ချင်တယ် Comment by lai lai htay on February 10, 2012 at 3:40pm Thank Comment by zaw hein on January 28, 2012 at 10:57pm ကျွန်တော့်ကိုလည်းကူညီပါဦးနော်ကျွန်တော့်ဖုန်းကblackberry 8520ပါ.myanmar font သုံးချင်လို့ပါ Comment by တေဇာလင်း on January 4, 2012 at 4:40am sony ericsson W8 မှာမြန်မာဖောင့်သုံးချင်လို့ ကူညီကျပါလားခင်ဗျ Comment by mmsoe on November 28, 2011 at 10:54pm android ဖုန်း အသုံးပြု ပုံ ကို ဘယ်မှာရှာရမလဲ....သိရင်ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးကြပါ... Comment by HTOOMINNAING on October 8, 2011 at 11:39am ကျွန်တော် Iphone ကို jailbreak လုပ်ဖို့ redsnow ရော firmeware ရော ဒေါင်းပြီးပါပြီ ပြသာနာက frimeware ကို Logo ပုံလေးပေါ်အောင်လုပ်တာ မရဘူးဖြစ်နေတယ် zip ဖိုင်ကိုလည်း youtube ကနေကြည့်ပြီးဖြေတာမရဘူးဖြစ်နေပါတယ် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းလေးအကြံပေးကြပါဦး တိုင်ပတ်နေလို့ပါ အဲနားမှာပဲတဝဲလည်လည်ဖြစ်နေလို့ပါ ကူညီပါဦး အကိုတို့ရေ ‹ နောက်သို့
14. ★♥♪✞ထာဝရ✞♪♥ ★
လက်ဆောင်ပေးမယ် alovery jam
လက်ဆောင်ပေးမယ် Arkar Zaw Moe
လက်ဆောင်ပေးမယ် aye myat
လက်ဆောင်ပေးမယ် bawi nun siam
လက်ဆောင်ပေးမယ် chit loon nge
လက်ဆောင်ပေးမယ် chit thu
လက်ဆောင်ပေးမယ် cho cho chit thu